अनिवार्य बस्ती: सहमत वा असहमत? - Law & More B.V.
अनिवार्य बन्दोबस्त: सहमत गर्न वा असहमत हुन?
एक torणी जो अब आफ्नो बकाया debtsण तिर्न सक्षम छैन केहि विकल्पहरू छन्। ऊ आफ्नै लागि फाइल गर्न सक्छ दिवालियापन वा वैधानिक restण पुनर्गठन व्यवस्थामा प्रवेशको लागि आवेदन दिनुहोस्। लेनदारले उसको torणीको दिवालियापनको लागि पनि आवेदन दिन सक्छ। एक torणी WSNP (प्राकृतिक व्यक्ति tण पुनर्संरचना ऐन) मा भर्ना हुन अघि, उसले एक दयनीय प्रक्रिया पार गर्नुपर्नेछ। यस प्रक्रियामा, सबै लेनदारहरूसँग एक सुखद सम्झौतामा पुग्न प्रयास गरियो। यदि एक वा धेरै लेनदारहरू सहमत भएनन् भने, .णीले अदालतले अस्वीकार लेनदारहरूलाई बस्तीमा सहमत हुन जबरजस्ती गर्न आग्रह गर्न सक्नेछ।
अनिवार्य सम्झौता धारा २ 287 ए दिवालियापन ऐनमा विनियमित छ। लेनदेनकर्ताले डब्ल्यूएसएनपीमा प्रवेशको लागि आवेदनको साथसाथै अदालतमा अनिवार्य बन्दोबस्तको लागि अनुरोध पेश गर्नुपर्नेछ। त्यस पछि, सबै अस्वीकार लेनदारहरूलाई सुनुवाईमा बोलाइयो। तपाईं त्यसपछि एक लिखित रक्षा सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईं सुनुवाईको बखत आफ्नो रक्षा अगाडि राख्न सक्नुहुन्छ। अदालतले मुल्या .्कन गर्नेछ कि तपाईं उचित ढ the्गले मिलाप गर्न अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ कि। तपाईंको इन्कारमा रूचि र torणदाता वा अन्य इन्कारले प्रभावित अन्य लेनदारहरूको चासो बीचको असमानता ध्यानमा राखिनेछ। यदि अदालतको राय छ कि तपाईं ablyण निपटान व्यवस्थामा उचित रूपमा सहमत हुन अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्न, अनिवार्य बस्ती लागू गर्नका लागि अनुरोधलाई अनुमति दिइनेछ। त्यसोभए तपाईंले प्रस्ताव गरिएको बन्दोबस्तमा सहमति जनाउनुपर्नेछ र त्यसपछि तपाईंको दावीको आंशिक भुक्तानी स्वीकार्नुपर्नेछ। थप रूपमा, अस्वीकृत लेनदारको रूपमा, तपाईंलाई कार्यवाहीको लागत तिर्न आदेश दिइनेछ। यदि अनिवार्य बन्दोबस्त लागू गरिएको छैन भने, यो मूल्या be्कन गरिनेछ कि तपाईंको torणी theण पुनर्गठनमा भर्ना हुन सक्छ, कमसेकम लामो सम्म theणीले अनुरोध कायम गरेमा।
के तपाइँ लेनदारको रूपमा सहमत हुनुपर्दछ?
सुरूवात विन्दु यो हो कि तपाइँ तपाइँको दावीको पूर्ण भुक्तानीको हकदार हुनुहुन्छ। त्यसकारण, सैद्धान्तिक रूपमा, तपाईंले आंशिक भुक्तान वा (मित्रैलो) भुक्तानी व्यवस्थामा सहमत हुनुपर्दैन।
अदालतले अनुरोधलाई विचार गर्दा बिभिन्न तथ्यहरू र परिस्थितिहरूलाई ध्यानमा राख्नेछ। न्यायाधीशले प्राय: निम्न पक्षहरूको मूल्या assess्कन गर्दछ:
प्रस्ताव राम्रो र भरपर्दो दस्तावेज छ;
restण पुनर्संरचना प्रस्ताव एक स्वतन्त्र र विशेषज्ञ पार्टी (उदाहरण एक नगरपालिका क्रेडिट बैंक) द्वारा मूल्यांकन गरिएको थियो;
यो पर्याप्त स्पष्ट गरिएको छ कि प्रस्ताव अति नै हो कि torणी बनाउन आर्थिक रूपमा सक्षम मान्नु पर्छ;
दिवालियापन वा debtण पुनर्संरचनाको विकल्पले torणीको लागि केहि संभावना प्रदान गर्दछ;
दिवालियापन वा debtण पुनर्संरचनाको वैकल्पिक लेनदेनको लागि केहि संभावना प्रदान गर्दछ: कसरी अस्वीकार लेनदेनले समान रकम वा अधिक प्राप्त गर्ने संभावना छ?
यस्तो हुन सक्छ कि forcedण निपटान व्यवस्थामा बाध्य सहयोगले लेनदारको लागि प्रतिस्पर्धालाई विकृत गर्दछ;
उस्तै केसको लागि उदाहरण छ;
पूर्ण अनुपालनमा लेनदारको वित्तीय ब्याजको गम्भीरता के हो;
कुल debtण को अनुपात अस्वीकार लेनदार द्वारा लेखाएको छ;
अस्वीकार लेनदार aloneण निपटानमा सहमत अन्य लेनदारहरूको साथ एक्लै खडा हुनेछ;
पहिले एक सुखद वा बाध्य .ण निपटान भएको छ जुन राम्रोसँग कार्यान्वयन गरिएको छैन। 
न्यायाधीशले त्यस्ता मुद्दाको छानबिन कसरी गर्छ भनेर स्पष्ट पार्न यहाँ एउटा उदाहरण दिइयो। डेन बोस  मा अपीलको अदालतको समक्ष, यो विचार गरिएको थियो कि एक icणीले उनको लेनदारको लागि एक मिलनसार बस्तीमा गरेको प्रस्तावलाई चरमको रूपमा लिन सकिंदैन किनकि ऊ व्यावहारिक रूपमा सक्षम हुन सक्ने आशा गर्न सकिन्थ्यो। । यो नोट गर्नु महत्वपूर्ण थियो कि torणी अझै अपेक्षाकृत जवान थियो (२ years वर्ष) र आंशिक रूपमा त्यो उमेरको कारणले गर्दा, सिद्धान्तमा, एक उच्च सम्भावित कमाई क्षमता थियो। यसले छोटो अवधिमा कार्य प्लेसमेन्ट पूर्ण गर्न पनि सक्षम हुनेछ। त्यो स्थितिमा, यो आशा गरिएको थियो कि debणीले भुक्तानी जागिर पाउन सक्षम हुनेछ। वास्तविक रोजगारीका अपेक्षाहरू प्रस्तुत गरिएको settlementण निपटान व्यवस्थामा समावेश थिएनन्। नतिजा स्वरूप, परिणामको सर्तमा वैधानिक debtण पुनर्संरचनाको मार्गले के प्रस्ताव गर्दछ भनेर ठीकसँग निर्धारण गर्न सम्भव थिएन। यसबाहेक, अस्वीकृत लेनदार, डीयूओको ण कुल ofणको एक ठूलो अनुपातको लागि जिम्मेवार छ। अपीलको अदालतको धारणा थियो कि डीयूओले उचित मैत्री सम्झौतामा सहमत हुन अस्वीकार गर्न सक्दछ।
यो उदाहरण चित्रण उद्देश्यको लागि मात्र हो। यसमा अन्य परिस्थितिहरू पनि मुछिएका थिए। लेनदेनकर्ताले मित्रैलो बस्तीमा सहमत हुन अस्वीकार गर्न सक्दछ कि हुँदैन केस केसमा फरक पर्दछ। यो विशिष्ट तथ्यहरु र परिस्थितिहरु मा निर्भर गर्दछ। के तपाईं एक अनिवार्य बन्दोबस्तको सामना गर्दै हुनुहुन्छ? कृपया एक वकिल मा सम्पर्क गर्नुहोस् Law & More। उनीहरूले तपाईंको लागि एक प्रतिरक्षा लिन सक्छन् र सुनुवाईको समयमा तपाईंलाई मद्दत गर्दछन्।
 अपीलको हर्टोजेनबोश अदालत July जुलाई २०२०, ECLI: NL: GHSHE: २०२०: २१०१।
 अपीलको हर्टोजेनबोश अदालत १२ अप्रिल २०१ 2, ECLI: NL: GHSHE: 12: १2018।
अर्को कार्य शर्त ऐन अनुसार रोजगारदाता र कर्मचारीको दायित्व »
पछिल्लो Qu टकीला संघर्ष